Iitattoos zangaphandle, impembelelo evela ngaphandle | Ukwenza umvambo
Nat Cherry | | Iimpawu zomntu
I-tattoos yangaphandle, njengoko unokucinga, ibonisa izinto ezingaqhelekanga ezivela ngaphandle. Nokuba kuyilo olunemibala kakhulu okanye kumnyama namhlophe, akukho mathandabuzo ukuba ezi tattoos zinamathuba amaninzi kwaye sinokufumana okuninzi kuzo.
Kungenxa yoko, Kule nqaku malunga ne-tattoos yangaphandle siya kuthetha ngeentsingiselo zabo ezinokwenzeka, ngaphezu kokukunika iingcamango kunye nokuxelela ngokufutshane indlela esinokuyisebenzisa ngayo.. Ukongeza, sincoma ukuba ufunde eli nqaku lihambelanayo malunga nokukhethwa kwe I-tattoos yendawo: iiplanethi, oosomajukujuku kunye nokucinga okuninzi.
1 Intsingiselo yee tattoos zasemzini
1.1 Abaphambukeli benza umahluko
1.2 Kubalandeli beentsomi zenzululwazi
1.3 Abona baphambukeli bokwenene
1.4 Sincinci kangakanani
1.5 Baleka kuyo yonke into kwaye wonke umntu
2 Iingcamango zeTattoo zasemzini
2.1 Iisosi ezibhabhayo
2.2 Abaphambukeli beClassic
2.3 Abahlaseli basemajukujukwini
2.4 Pin-up abasemzini
2.5 Imigca yasemzini
3 Indlela yokuthatha inzuzo ye tattoo yale ndlela
4 Iifoto zeTattoo zasemzini
Intsingiselo yee tattoos zasemzini
Akubonakali ngathi, kodwa Iitattoos eziqulathe ezi zidalwa zivela ngaphandle zinokuba neentsingiselo ezininzi ezahlukeneyo. Nazi ezimbalwa, zombini ezona zidumileyo nezingaqhelekanga.
Abaphambukeli benza umahluko
Mhlawumbi enye yeentsingiselo eziqhelekileyo kwii tattoos zasemzini yiyo ebonisa ukuba awuyena umntu oqhelekileyo. I-extraterrestrial ivela kwindawo ekude kakhulu, ngoko ke ngokunyanzeliswa imele izive ngathi yasemzini phakathi kwabantu. Ngenxa yesi sizathu, ii-tattoos ezinala magama zihlala zinxulumana nomntu ongaphili ngokwesiqhelo, kwaye ozibona engowasemzini ngokupheleleyo kwindawo yakhe (eneneni, umphambukeli uthetha ngokuchanekileyo oko ngesiNgesi).
Kubalandeli beentsomi zenzululwazi
Intsomi yenzululwazi isinike imiboniso kunye nabantu abavela kwamanye amazwe kuzo zonke izinto ezithandayo kunye nezingenakulibaleka. Ukusuka izitya ezoyikekayo ze Imfazwe yeHlabathi, kwi-xenomorph ye OMnye, kwi-cerebral (kunye nabantu abangenangqondo) be Ukuhlaselwa kukaMars kunye nerobhothi yasentsomini ye Iplanethi engavumelekanga. Intsomi yezeNzululwazi izele zizidalwa zasemajukujukwini zabo bonke abalinganiswa kunye nezinto ezingcakazayo ezinokuphefumlela iqhekeza elixabisekileyo, kwaye, ewe, lamkele intsingiselo yalo.
Abona baphambukeli bokwenene
Kwabo bakholelwa ukuba abasemzini abaxoki, ukuba inyani ikhona okanye abanokucinga ukuba bangamaxhoba okuxhwilwa kwamanye amazwe, akukho nto ifana nokukhwaza iinkolelo zethu kwihlabathi nge tattoo elungileyo. Ngaloo ndlela, intsingiselo yale tattoos (ehlala iphefumlelwe ngabaphambukeli abavela kummandla we-51 okanye iisosi eziphaphazelayo) idla ngokuhambelana nomnqweno wokudlulisela kwihlabathi elisingqongileyo amaninzi amayelenqe kwaye kufuneka ugcine amehlo akho evulekile. . .
Ngakolunye uhlangothi, ii tattoos zasemzini nazo zinokubonisa ukuba sincinci. Indawo yindawo enkulu kakhulu, egcwele izidalwa ezinokwenzeka ezoyikisayo, iimeteorite, iiplanethi ezihlala abantu okanye ezingahlali mntu. Siyingqolowa yesanti kwindalo yonke enkulu kangangokuthi ibalekela ukuqonda kwethu, ngoko ke tattoo enabafokazi okanye i-UFOs inokufezeka ukuhambisa loo nto ingenakuncedo.
Baleka kuyo yonke into kwaye wonke umntu
Ekugqibeleni, Iitattoos zesi sitayile, ngakumbi ezo zinesosi ephaphazelayo njenge protagonist, zinokuthi zibhekiselele kumnqweno wokubaleka kuyo yonke into. nakwihlabathi liphela. Nokuba umntu onxibayo unokujonga ukuba ikhaya labo lokwenyani alikho eMhlabeni, kodwa kwiplanethi ekude kakhulu.
Iingcamango zeTattoo zasemzini
Iitattoos zasemzini banokunika umdlalo omninzi njenge tattoos, ekubeni uninzi loyilo lunokusetyenziswa kunye nabo. Ukongeza, umbala (okanye hayi) nawo udlala indima ebalulekileyo, njengoko siza kubona ngezantsi ngezi mbono:
Akuthandabuzeki Enye yeengcamango eziphambili, kunye nezona zinika umdlalo ongaphezulu kwi-tattoos yangaphandle, zi-saucers ezindizayo, ekwabizwa ngokuba zii-UFOs. Ziyakwazi ukubonakala zinkulu kumnyama kunye nomhlophe kunye nomzobo olula, nangona zikhangeleka ngakumbi xa ziphinda zivelisa indawo eyinyani.
Ngaba ubusazi ukuba eyona mbonakalo yakudala yabaphambukeli, ebachaza njengezidalwa ezimfutshane ezinobuntu obungwevu kunye nemithi ye-almond, yaqala ukuvela ngenkulungwane ye-XNUMX? YayiseMeda: Ibali lekamva, nangona inkangeleko yayo ingazange idume ngokupheleleyo kwada kwasemva kwexesha elithile, kwiminyaka yamashumi amathandathu enkulungwane yama-XNUMX, xa kwakuthinjwa okokuqala eUnited States, kudlalwa uBarney noBetty Hill., isibini ekutyholwa ukuba saxhwilwa ngabaphambukeli ngobusuku obunye, kangangeeyure ezimbini. Ngokuqinisekileyo into ekufanele uyikhumbule kwi tattoo!
Owona mdlalo wevidiyo udumileyo apho abafokazi bathatha inxaxheba, I-Space Invaders inobuhle obonakalayo kwaye isebenza kakuhle kakhulu kumnyama namhlophe kunye nokuchukumisa umbala.Nangona, ewe, zihlala zikhangeleka ngcono kuyilo olulula.
Izitayile zesiNtu kunye ne-pin-up zibukeka zintle kwiitattoos ezinabalinganiswa bepin-up, nokuba ngoosomajukujuku okanye abasemzini. Ngemigca engqindilili kunye nemibala evuthayo, ezi tattoos zikhangeleka kakuhle zineengcebiso ze-sci-fi ye-XNUMXs, njengemipu ye-ray ephambeneyo, iisuti zokuntywila ezingenakwenzeka kunye nabaphambukeli abalusu oluluhlaza.
Imigca yeNazca kuthiwa izotywe ngabaphambukeli. Kwaye nangona kwakungenjalo (ziyi-geoglyphs ezidalwe ukudibanisa ukubonakala kwamanzi okanye njengentlawulo yoothixo ukuba babone ukusuka esibhakabhakeni), bapholile kakhulu kwi tattoo, ngokuchanekileyo ngenxa yokulula kwabo. Ukongeza, unezizathu ezininzi zokuphefumlelwa: iinkawu, i-hummingbirds, izinja ...
Indlela yokuthatha inzuzo ye tattoo yale ndlela
I-tattoos yangaphandle inika umdlalo omningi, kuba indawo ineenkalo ezininzi ezahlukeneyo: inokuba nemibala kakhulu, kodwa ibe nengqondo, inokwenziwa lula kakhulu, kodwa iphinde iveliswe kubo bonke ubukhazikhazi bayo.
Ngaloo ndlela, Ngokuxhomekeke kwisitayela kunye nohlobo lwe tattoo oyikhethayo, kuya kucetyiswa ukuba ulandele iingcebiso ezithile okanye enye. Umzekelo, kuyilo olulula zama ukuba abaphambukeli abacaci kakhulu. Uyilo lweklasikhi kunye nobuso obude kunye namehlo e-almond afanelekile ngolu hlobo lwe tattoo, kunye ne-UFOs enemigca emihle kunye neenkcukacha ezincinci.
Ngakolunye uhlangothi, eyona tattoos enenyani inokusebenzisa umbala kunye nezitayela ezahlukeneyo. Okwenyani kujongeka kukuhle ekuvelisweni kweemuvi ezinje ngeAlien, ngelixa isitayile semveli sipholile kakhulu kuyilo olufuna ipin-up touch.
Akuthandabuzeki I tattoos zangaphandle zipholile kakhulu kwaye zineentsingiselo ezingaphezulu kunokuba zibonwa ngamehlo, inyaniso? Sixelele, unayo i tattoo yesi sitayela? Ngaba ukhethe uhlobo oluthile? Ithetha ntoni kuwe?
Iifoto zeTattoo zasemzini
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iimpawu zomntu » Iitattoos zangaphandle, impembelelo evela ngaphandle
Iiglavu zebhokisi iitattoos, intsingiselo kunye neengcamango